नयाँ शक्तिको नजरमा देउवा सरकारका १३ चुनौती(भिडियोसहित)
देउवा र प्रचण्ड दुबै भारतभक्तः मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध असन्तुलित
प्रकासित मिति : २०७४ जेष्ठ २५, बिहीबार प्रकासित समय : ०८:४३
सरकार निर्माणको प्रकृया सुरु भै सकेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ज्युले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनियताको सफथ लिनु भएको छ । सबैभन्दा पहिला त उहाँलाई बधाई छ । उहाँको कार्यकाल सफल रहोस भन्ने पनि म चाहान्छु, तर उहाँ चुनौतीहरुको चाङहरुको बिचमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँका अगाडि अहिले धेरै प्रकारका चुनौतीहरु देखिएका छन, त्यसलाई क्रस गरेर अगाडि जान उहाँलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
१) सबैभन्दा पहिलो कुरा त, उहाँ जस्तो तरिकाले प्रधानमन्त्री बन्नु भयो, त्यो सहमती ठीक ढंगले भएको देखिदैन । भागबण्डाको हिसाबले गरिएको सहमती र त्यसको आडमा निर्माण हुने सरकारले गलत संन्देश प्रवाह गरेको छ । ‘आधा अवधि तिमी खाने, आधा अवधि म खाने, त्यसपछि एउटा चुनाव तिमीले गर्ने, अर्को २ वटा चुनाव मैले गर्ने’ भन्ने मुल भावका साथ भएको सहमती र त्यसले जन्माएको सरकारबाट जनताले कस्तो अपेक्षा गर्ने ? अनि त्यसपछि मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने जुन ढङ्गले, जुन तरिकाले उहाँले मन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो नै सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यस्ले धेरै ठूलो पिडा उहाँलाई आउँदा दिनहरुमा दिने छ । यो भन्दा अगाडि पनि उहाँ धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, तर अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई प्रधानमन्त्री पद आफैमा एउटा पहिलो चुनौती हो ।
२) दोश्रो कुरा, प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनमा नै चुनौती देखिन्छ । उहाँले तोकिएकै मितिमा निर्वाचनको कुरा गर्नुभएको छ, तर निर्वाचनको लागि यो तेश्रो पटक सरेको मिति हो । अनि तेस्रो पटक सरेको मितिमा पनि चुनाव हुन्छ कि हुदैन, हुन्छ कि हुदैन भन्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहेको छ । यसले उहाँको कार्यभारमा चुनौती थपेको छ । त्यसका साथै जस्का निम्ति भनेर उहाँहरुले मिति सार्दै,सार्दै जानु भएको छ राजपा, उहाँहरु चाही चुनावमा अहिले सम्म पनि सन्तुष्ट भैसक्नु भएको छैन । उहाँहरु अहिले पनि निर्वाचनमा जाने सैकेत देखिएको छैन । जानुभयो भने पनि त्यो असाध्यै चुनौती बोकेको भूगोल भएकाले सरकारसँग अरु धेरै खालका चुनौतीहरु आउने देखिन्छ । त्यसकारण त्यो ठाउँमा भर्खर स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरा सरकारको लागि दास्रो ठूलो चुनौती हो ।
३) तेश्रो कुरा, संवैधानिक हिसाबले २०७४ को माघ ७ गते भित्रमा प्रदेश र संघीय प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने र नयाँ सरकार हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने सरकारको अगाडि संबैधानिक चुनौती रहेको छ । त्यो चुनौती छदै थियो, प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि, अस्ति मात्रै उहाँले प्रतिपक्ष दलहरु र अरु पार्टीहरुसँग पनि यो तीने तहको निर्वाचन तोकिएकै मिति भित्र गर्ने छु भनेर भन्नु भएको छ । त्यो अर्को ठूलो चुनौती हो ।
४) चौथो कुरा, उहाँ सरकारमा त जानु भयो, तर उहाँको पार्टीभित्र नै एउटा समूह प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको देखिन्छ । उहाँको पार्टी भित्रको प्रतिपक्ष जबर्जस्त रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेको पनि देखिन्छ, संसदको प्रतिपक्ष जबर्जस्त छ, सडकको पनि प्रतिपक्ष जबर्जस्त छ, अनि मुख्य प्रतिपक्ष दलहरुको असहयोग, अवरोध र बाधा पनि त्यत्तीकै कडा रुपमा देखिएका छन । उहाँलाई चातर्फि रुपमा चुनौतीका पहाडले घेरिएको जस्तो देखिन्छ ।
‘हिजो संसद बिघटन गरेको, माओवादी जनयुद्धमा लागेकाहरुलाई आतंककारी घोषणा गरेको, टाउँकोको मुल्य तोकेको र एम्बुस थापेर लडाईको मैदानबाट आएको फरक फरक वैचारीक आदर्स बोकेका यी दुई राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा सत्ताँ साझेदारी गरिराखिएको छ । तसर्थ त्यो ४० बुँदेले उहाँलाई सधै भरी सताउँने निश्चित नै छ ।’
५) पाँचौ कुरा, उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला, तत्कालीन माओवादीले चालीस बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो मागका बारेमा जनजीवीकाका सवालहरु उठाइएका थिए, जुन अहिलेसम्म पनि यथावत नै रहेका छन । जुन समान सन्धीहरु भनिएका छन, ती पनि यथावत नै छन । चालीस बुँदे माग पुरा नगर्दा भएकोे जनयुद्ध र त्यसको क्षतिबाट सत्र हजार मानिसको ज्यान गयो । तर त्यो जनयुद्धबाट जनताको जीवन स्तर बदल्ने कुरा थियो, अवस्था बदल्ने कुरा थियो, विडम्बना भन्नुपर्छ, अझ पनि जनताको अवस्था बदल्न सकिएको छैन । अहिले फेरी हिजो संसद बिघटन गरेको, माओवादी जनयुद्धमा लागेकाहरुलाई आतंककारी घोषणा गरेको, टाउँकोको मुल्य तोकेको र एम्बुस थापेर लडाईको मैदानबाट आएको फरक फरक वैचारीक आदर्स बोकेका यी दुई राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा सत्ताँ साझेदारी गरिराखिएको छ । तसर्थ त्यो ४० बुँदेले उहाँलाई सधै भरी सताउँने निश्चित नै छ ।
६) अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री उहाँले आतंककारी घोषणा गरेको, टाउको को मुल्य तोेकेको मान्छेलाई दिईराख्नु भएको छ । हुन त राजनीतिमा कोहि पर, कोहि वर हदैन तर त्यो त फ्याक्ट हो नि । त्यो तथ्यलाई उहाँले बिर्सन कठीन हुनेछ । सँगसँगै त्यही ४० बुँदा बुझाउँने डा.बाबुराम भट्टराई अहिले वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यासम जुट्नु भएको छ । अब नयाँ विकल्पको निम्ति अगाडि जानुपर्छ, विकास र सुशासनका निम्ति भनेर डाक्टरसाव अहिले सडकमा हुनुहुन्छ । विप्लब जी माओवादी आन्दोलनको एउटा हस्ति हो, उहाँ चाही अहिले पनि यो सबै दलालीकरण भयो, यो दलालहरुको सरकार हो भनेर भनिरहनु भएको छ, र यसका बिरुद्धमा उहाँहरुले धावा बोलिराख्नु भएको छ, यसका साथै मधेश आन्दोलन त छदै छ । मधेश आन्दोलन त संबिधानमा असन्तुष्टिका कुरा छन, ती असन्तुष्टि समर्थनका कुरासँग फेरी अर्को सिकेरावत प्रवृति पनि देखिदै छ । त्यो प्रवृतिले मुलुक नै बिखण्डनको दिशामा जाने खतरा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । मधेश नेपाल नै होईन, नेपालबाट त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ भनिरहेको प्रवृतिलाई मधेशमा थुप्रै सशस्त्र धारीहरुसँग सरकारमा बसेका बेला जुनसकै मन्त्रीले पनि सम्झौता गर्ने गर्नुहुन्छ । ती सशस्त्रधारीहरु अहिले चाहि युद्धबिराम गरेर बसेका होलान भोलि कुनै बेला ती सशस्त्रधारीहरु फेर टाउँको उठाउने छन । सरकारको अगाडि यि सबै विषयलाई हल गर्न अत्यन्तै कठीन हुने देखिन्छ ।
७) त्यस्तै उहाँहरुले लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध जुन महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्कीलाई हटाउनु भयो, त्यसपछि अहिले दीप बस्नेत जीलाई प्रमुख आयुक्त बनाएर ल्याउनु भएको छ । लोकमानसिंहलाई हटाईसकेपछि त्यसले के देखाउँछ भने, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा त्यो एउटा पेशा हो, त्यो राजनीति गर्नेहरुले काम हो, त्यो मध्ये पनि सत्ता चलाउनेहरुले राम्रो मध्येको एकदम पोसाउँने, एकदम प्रोफिटेवल बिजिनेस हो, भन्ने देखाइराखेको छ । त्यो भ्रष्टाचार गर्नका निम्ति बाँधा, अवरोध सिर्जना गर्ने लोकमानहरुलाई हटाएपछि अब हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा उहाँहरु पुगिरहनु भएको छ तर, त्यो धेरै ठूलो चुनौती हो । भ्रष्टाचार नगर है, भन्नका निम्ति अरु कसैलाई पनि त्यो ठाउँ छैन।
८) अबको राजनीति व्यवस्था बदल्ने राजनीति होइन, अब अवस्था बदल्ने राजनीति गर्ने बेला हो । त्यसका निम्ती जनताको जीवन स्तर उकास्ने कुरा, सुशासन, विकास, आर्थिक समृद्धी यि सबै कुराको लागि भिजन चाहिन्छ, दुरदृष्टि चाहिन्छ, प्लानिङ चाहिन्छ । स्वदेशी लगानी सदुपयोग गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने त्यस्तो खालको वातावरण चाहिन्छ । तर सरकार कस्तो बन्दै छ भने भ्रष्टचारमा नाम कमाएकाहरुको कोर्डिनेसनमा सरकार बन्दै छ । त्यसो भएको हुनाले यो आर्थिक समृद्धिको कुरा, सुशासनको कुरा, विकासको कुरा र अहिलेको सरकार गठबन्धनको कुरा, यी दुई वटा चिज म्याच भइराखेको छैन । यसले सरकारलाई थप चुनाती दिने निश्चित छ ।
९) मुलुकको सबै अधिकारहरु स्थानीय तहमा प्रदेशको चुनाव भएपछि प्रदेशमा जानेवाला छ, संघ त एउटा समुन्वयनकारी बडीको रुपमा मात्र रहने वाला छ । मुलुक संघीयकरण भएको छ तर किङमेकरहरु भने असाध्यै फरक रुपमा प्रस्तुत हुदै गैराखेका छन । सारा संसार नै हाम्रो हो, हामी संविधान भन्दा माथि छौ, हामीले गरेपछि के हुँदैन भन्नेहरुको समुन्वयनकारी भुमिकामा रहने संविधानले स्थानीय तहलाई के कति नै दिएको छ ? तीनीहरुको एक्टिभ हुने जनतासँग ठूलो अन्तर विरोध हुने छ । यी चुनौतीहरुलाई हल गर्न शेरबहादुर देउवालाई ठूलो समस्या हुने छ ।
‘शेरबहादु्र देउवा जीको किचेन क्याविनेटले पनि उहाँलाई बाहिर जान दिने छैन । यो किचन क्याविनेटको समस्या पनि देउवाजीको लागि दुर्भाय सावित हुने निश्चित छ ।’
१०) देउवाजीको घर, परिवार र आफन्तको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उनको लागि अतिनै महत्वपूर्ण र ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ । त्यसो त प्रचण्डजी आफुले चाहदाखेरी कति गर्न सक्नुहुने थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । आफुले चाहेको चिज पनि छोरोको कारणले, छोरीको कारणले, श्रीमतीको कारणले, अरुको कारणले, बुहारीको कारणले उहाँ सधै बदनाम भै राख्नु भयो । त्यो समस्या उहाँले अहिले पनि हल गर्न सक्नु भएको छैन । त्यही चिज शेरबहादु्र देउवा जीको किचेन क्याविनेटले पनि उहाँलाई बाहिर जान दिने छैन । यो किचन क्याविनेटको समस्या पनि देउवाजीको लागि दुर्भाय सावित हुने निश्चित छ ।
११) शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड जी दुबै जना दश बर्षको जनयुद्धका निम्ति भिडन्त गरेका कमाण्डरहरु हुन । यी दुई वटा कमाण्डरको कारणले त्यतिबेला सत्र हजार मानिसको ज्यान गयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयागमा साठी हजार भन्दा बढी उजुरीहरु परेका छन । ती उजुरीहरु हल गर भनेर दुनियाँले भनेको छ, अन्तराष्ट्रिय निकायले भनेको छ । अब त्यो चिजलाई हल गर्नका निम्ति, आज बर्ष भयो त्यसको गीत गाउन थालेको । यस अबधिमा पनि त्यसले पाइलो टेकेको छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै बालकृष्ण ढुङगेलजीलाई सात दिनमा पक्राउ गर्न सर्बोच्चले आदेश दिए पछि उहाँ भुमिगत हुनुपर्यो । त्यही पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला, त्यही पार्टीका एउटा नेता भुमिगत हुनु परेको छ । अब यस्ता खालका चुनौती सरकारले कसरी बेहोर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
१२) भ्रष्टाचारका निम्ति प्रचण्डका विरुद्ध पनि ठूलो आरोप छ । शेरबहादुर देउवामाथि पनि ठूलो आरोप छ । आयोगले त उनलाई भ्रष्टाचार भनेर थन्काएकै हो । लोकतन्त्रका कारणले उहाँ रिलिज हुनु भयो । उहाँको त्यो भ्रष्टचारको भ्रष्ट आचरणको कुरा, उहाँले सहि आचरण हो भनेर पुष्टी गर्न सक्नु भएको छैन । प्रचण्डजीलाई पनि क्यान्टनमेन्टमा भएको भ्रष्टचार, अन्य व्यवसायमा भएको भ्रष्टचार, ऐनसेलसँगको कारोबारको कुरा र भनौ थुप्रै यस्ता अरबौ अर्बका कारोबारहरु छन । अहिले उहाँहरुले लोकमानलाई हटाउनु भयो । तर पहिले बच्नलाई त्यहि लोकमान ल्याउँनु भएको थियो । बचाउन नसक्ने भएपछि हटाउनु भयो, फेरी अर्को लोकमानलाई ल्याउँनु भएको छ, उहाँले पनि त्यहाँ बसेर भ्रष्टचार विरुद्ध अनुसन्धान नगर्ने हो भने के गर्ने ? गरे उहाको पनि बिदाई हुन सक्छ, उहाँले पनि गर्नु भएन भने पनि अर्को कोहि न कोहि त आउँछ । यसले दिने संन्देस पनि आफैमा सरकारको लागि चुनौती हो । बिसौँ बर्ष, पचासौँ बर्षपछि पनि भ्रष्टचारको अनुसन्धान हुन्छ, त्यो उहाँका लागि अर्को चुनौति हो ।
‘इन्डीयन पत्रपत्रिकाले ‘भारत समर्थक देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री’ बने भनेरै छापेको छ । अर्को कुरा देउवाको समर्थक प्रचण्ड छन । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पच्चिस बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । यो चिजले हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलकलाई सन्तुलन गर्नका लागि सरकारलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ ।’
१३) शेरबहादुर जी इन्डीयामा गएर दलाई लामा सहभागी हुने एउटा कार्यक्रममा अथिति भएर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रमाणपत्र पाउनु भयो । त्यति वेला पनि पत्रपत्रिकाहरुले छापेका थिए र आज प्रधानमन्त्री भैसक्दा पनि छापेका छन, अझ इन्डीयन पत्रपत्रिकाले ‘भारत समर्थक देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री’ बने भनेरै छापेको छ । अर्को कुरा देउवाको समर्थक प्रचण्ड छन । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पच्चिस बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । उहाँले के भन्नु भयो भने, नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने बिर्सिएर अन्तराष्ट्रिय मामिलाहरुमा भारत जे मत राख्छ त्यसको पक्षमा उभिन्छौ । भारत जे मत राख्छ नेपाल त्यहि मत राख्छ भनेर उहाँले भारतको पक्षमा बोल्दै आफ्नो नौ महिने कार्यकाल सिध्याँएर जानुभयो । उहाँकै समर्थनमा पुर्न देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यो चिजले हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलकलाई सन्तुलन गर्नका लागि सरकारलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन ।)